December 2011 - နည်းပညာ
12/20/2011 08:10:00 AM Computerနည်းပညာ, cssနည်းပညာ, Internetနည်းပညာ, ရင်တွင်းကအလင်္ကာ, သိမှတ်ဖွယ်ရာ, သီချင်း, ဆော့ဖ်ဝဲများ No comments
Bat Files သင်ခန်းစာ (၁)
Bat files အကြောင်းကို သိချင် လေ့လာချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ကိုယ်တိုင်းရေးမဟုတ်ပေမဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မသိခင်က စလေ့လာမိခဲ့တဲ့ ဆိုဒ်မှ မှတ်စုအနေနဲ့ ကူးထားခဲ့တာလေးပါ။ အဲ့ဒီဆိုဒ်ကို ညွန်းချင်ပေမဲ့လည် လက်ရှိ ဆိုဒ်လိပ်စာကလည် မတွေ့တော့တာကြောင့် စာရေးသားသူအနေနဲ့ နားလည်ပေးမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာကို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်း ရေးသားထားတာ မဟုတ်တာကိုတော့ ရိုးသားစွာ ၀န်ခံပါတယ်။ ဒါကြောင့် မသိမနားလည်ရင်တော့ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ အကျွမ်းကျင်ဆုံး အဆင့် မဟုတ်ပေမဲ့ တက်နိုင်သမျှ ရှင်းပြပေးပါမည်။ မှုရင်း အရေးအသား အတိုင်း မပြင် မဖြည့်စွတ်ဘဲ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း တအားနဲ့ မကျွမ်းကျင်သလို ၊ ဒီ Batch File Programming အကြောင်းကို လေ့လာဖူးတာ အလွန်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယခု လေ့လာချင်ပါတယ်ဟုပြောသော သူများရှိသောကြောင့်သာ အခုလို အခြေခံကအစ ရေးပေးဖြစ်တာပါ။ အခြေခံအကျဆုံးနဲ့ ကွန်ပြူတာစသုံးဖူးတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ အဆင်ပြေအောင်တစ်ခါထဲရေးပေးကြည့်ပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် မလေ့လာတော့ဘဲ ပစ်ထားတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အခုမှ ပြန်ကိုင်လိုက်သလိုဖြစ်နေတာကြောင့် မပြည့်စုံတာများလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကျနော့်ခေါင်းထဲမှာ မှတ်မိတာကိုဘဲ ပြန်ချရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်မပြေမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။ အားလုံးကို တစ်ခါတည်း အဓိပ္ပါယ်တွေ ပြောသွားမှာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဥပမာလေးတွေနဲ့ အလျင်းသင့်သလိုသာ ရှင်းပြီး တဆင့်ချင်းတက်သွားကြည့်ပါ့မယ်။ ကျနော်လည်း တစ်ခါမှမရေးခဲ့ဖူးတော့ ဘယ်က ဘယ်လို နားလည်အောင် စရှင်းပြီးရေးရမယ်မသိလို့ပါ။
ခုလောလောဆယ်တော့ မနက် ၄ နာရီ ထိုးသွားပြီဖြစ်လို့ ဒီလောက်နဲ့ ခေတ္တရပ်နားပါရစေ… နောက်နေ့မှာ တော့ ဒီ့ထက်ပိုခက်လာပြီး အသုံးကျလာမယ့် အပိုင်းတွေကို ဆက်လက်ရေးပေးပါ့မယ်။ မကြာမီလာမည်မျှော်….
>>>> ဤ tutorial သည် Bat အကြောင်း တစ်ခုမှ မသိ၍ အခုမှ စတင်လေ့လာမည့် သူများကို ရည်ရွယ်ရေးသား ခြင်းဖြစ်ပြီး bat အကြောင်းတီးမိခေါက်မိရှိပြီးသူများ အဖို့ကတော့ နောက်လာမည့် အခန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မည်ဟုထင်ပါသည်။ ဤ tutorial နှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်ပါ ၊ အကြံပေးပါ ၊ ပြန်လည် ဆွေးနွေးပါ ၊ ယခု ဆွေးနွေးထားသည် အထိထဲမှ သိလိုသည်များရှိလျှင် ၊ နားမလည်သည်များရှိလျှင် မေးပါ ၊ ကျနော် ကောင်းမွန်စွာ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမည်။ လိုအပ်ချက်များကို ထောက်ပြပေးမည့်သူများရှိပါကလည်း ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆို လက်ခံပြီး ကျေးဇူးတင်မှာပါ။ သို့ပေမယ့် မကောင်းပြောပြီး သိပြီးသားတတ်ပြီးသားကို ရေးနေသည်ဟုထင်သောသူများမှ လာရောက်ပြောဆိုပါက မည်သည့်တုန့်ပြန်မှုမျိုးမှ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်။ လေ့လာချင်သော သူများအတွက်သာ ရေးသားပေးခြင်းဖြစ်၍ အကျိုးမရှိဟု ထင်ပါက ဖတ်မနေပါနှင့် ကျော်သာသွားပါ။ စရေးကတည်းက ကျနော် ရေးချင်လွန်းလို့ အားနေလို့ ရေးရတာလည်း မဟုတ်ပါ။ တောင်းဆိုလာတဲ့ သူတော်တော် များပြီးတော့ တောင်းတဲ့သူတိုင်းက ကျနော့် အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတွေမို့ ရေးပေးဖြစ်သွားတာပါ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ bat နဲ့ ပတ်သက်လို့ တော်တော်များများရေးပေးသွားပါ့မယ်။ အကုန်နီးပါးသိအောင် ဒီ tutorial တစ်ခုတည်းနဲ့ ရေးပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားမှာပါ။ ဆက်လက် စောင့်မျှော်ပေးကြပါ။ နောက်ပြီးတော့ ကြော်ငြာဝင်လိုက်ဦးမယ် VB.NET 2008 နဲ့ C#.Net 2008 တို့ကိုလည်း E-Book ဖြစ်ဖြစ် ၊ စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ် ထုတ်လို့ရအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ e-book ဆိုရင်တော့ အလကားပေးဖြစ်မယ်။ စာအုပ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်လည်း သှူဌေးမဟုတ်တော့ အရင်းအတိုင်းတော့ ရောင်းပေးမယ်ဗျာ။ E-Book ဖြစ်အောင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးပါ့မယ်။
12/18/2011 07:22:00 AM Computerနည်းပညာ, cssနည်းပညာ, Internetနည်းပညာ, ရင်တွင်းကအလင်္ကာ, သိမှတ်ဖွယ်ရာ, သီချင်း, ဆော့ဖ်ဝဲများ No comments
ကဲ ဒီနေ့တော့ စောင့်ဖတ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် တန်ဖိုးအရှိဆုံး ပို့စ်တစ်ပုဒ်ကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ .. ကျွန်တော် ရှာထားသမျှထဲမှာ ဒီဆိုက်လေးက အပြည့်စုံဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် .. ကျွန်တော် ဒီဆိုက်လိပ်စာလေးကို တွေ့လိုက်တော့ အရမ်းကို ပျော်သွားတယ် .. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဘလောက်ဂ်မရေးတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဘလောက်ဂ်ကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေပေးလိုက်တဲ့ အဖြေတစ်ခုကို ရလိုက်လို့ပါ .. မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတွေ ဘလောက်ဂ်ကို ၀င်ရေးဖို့ အရမ်းခက်ခဲနေတဲ့အတွက် ဒီဆိုက်လေးကို လမ်းညွှန်လိုကတာပါ .. အရမ်းကိုကောင်းတယ်ဗျာ ... ကဲအခုချက်ခြင်း ကိုယ်ပိုင်ဝဘ်ဆိုက်လေးကို အမြန်ဆုံး ဖန်တီးလိုက်ရအောင်ဗျာ .. အဲ့ဒီ့ဆိုက်လေးမှာ ဘာတွေရလဲသိလား ..
(၁) movies တွေ
(၂) Photo တွေ
(၃) File တွေကို သိမ်းထားနိုင်မယ် ..
(၄) ၀ဘ်ဆိုက်ရဲ့ အရမ်းလှတဲ့ templates တွေကို Free ရယူပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဗျာ ..
(၅) ကိုယ်ပိုင်ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို ဖန်တီးသလိုပဲ ၀ဘ်ဆိုက် email address တစ်ခုရမယ်ဗျာ .. maunglay@webs.com
ပြောပြရရင်တော့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအများကြီးပဲဗျာ .. ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ အဆင်ပြေမှာပါ .. ကျွန်တော်လဲလုပ်ထားပါသေးတယ် .. http://www.minlwinmaunglay.webs.com တဲ့
ကဲကြာတယ်ဗျာ ဒီဆိုက်လေး ကို သွားကြည့်ကြရအောင် ...
အားလုံးပဲ ကြေနပ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .. ဘလောက်ဂ်ရေးချင်ရင်လဲ အဆင်ပြေပါတယ် .. အဲ့ဒီ့ဆိုက်လေးမှာ ပဲ ရေးလို့ရတယ် .. ကျွန်တော်လဲ အခုတစ်လော အလုပ်တွေက များများနေတာနဲ့ ပို့စ်တင်ဖို့တောင် မအားဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ .. နားလည်ပေးကြပါဦး ..
12/18/2011 07:16:00 AM Computerနည်းပညာ, cssနည်းပညာ, Internetနည်းပညာ, ရင်တွင်းကအလင်္ကာ, သိမှတ်ဖွယ်ရာ, သီချင်း, ဆော့ဖ်ဝဲများ No comments
Virus ၏ ပင်ကိုယ်သဘောကို ရှင်းပြခြင်း
ဘာတွေအတွေ့များလဲ။ ကျွန်တော့်စက်မှာတော့ Folder Option မပေါ်တော့ပါဘူး။ Virus ကိုက်နေပြီ။ ဘယ် Virus
အသစ်တွေကတော့ ပေါ်လာပြန်ပြီ။ ကယ်ကြပါ...ဒီမှာ ဘယ်လိုသတ်သတ် မသေဘူး အဲဒါတွေများနေတယ်မလား။
ဟုတ်တယ် Virus..Virus..။ လူတွေကို တော်တော် ဒုက္ခပေးတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေကိုလည်း ဒုက္ခပေးတယ်။ ကြီးကြီးငယ်ငယ်
အရွယ်အားလုံးကို ဒုက္ခပေးတယ်။ ကြားရင်တော့ ရယ်စရာကောင်းနေမလားမသိဘူး။
ကွန်ပျူတာ Virus ဆိုတာ သတင်းတွေ၊ အချက်အလက်တွေအားလုံးအတွက် အံ့ဩဖွယ်ရာသက်တမ်း အရှည်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုပြောသေးတာက Virus ဆိုတာ ကိုယ်တွေဘယ်လောက် တန်ဖိုးရှိလည်း တော်လဲတတ်လဲဆိုတာ
ပြောပြပေးတဲ့ကောင်တဲ့။ အင်း.. ဒီလိုဆိုတော့ Virus ကို ထိုင်တောင် ရှိခိုးချင်စိတ်ပေါက်သွားပြီ။
သေသေချာချာ ထွင်ထားတဲ့ Virus တစ်ခုကဆိုးကျိုးပေးတာ၊ ထိခိုက်စေတာ ပိုများတယ်။
နောက်ပိုက်ဆံသန်းပေါင်းများစွာကို နစ်နာစေတယ်။ ဟုတ်တယ်နော်..သူပြောထားတာလည်း ဟုတ်သားပဲ။ Virus တစ်ခု
ပေါ်လာတာက လူတွေကြောင့်ပဲ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ သူတို့က ပိုထိခိုက်စေလေ လူတွေတော်ကြောင်း ပိုကြွားသလို
ဖြစ်လေပဲပေါ့။ ထွင်တဲ့လူတွေကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လိုက်ပြောရမလိုပဲနော်။
Virus ဆိုတာကလည်း တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကို ပေါ်လာတာအမျိုးမျိုးပဲ။ ၂၀၀၄၊ ဇန်န၀ါရီတုန်းကဆို Mydoom Worm
ပေါ်လာပြီး တစ်ရက်တည်းမှာတင် မီလျံလေးပုံတစ်ပုံလောက် ရှိတဲ့ Computer တွေကို ကူးသွားတာ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၉၉၉
Melissa Virus ဆိုပြီး ပေါ်လာတယ်လေ။ Microsoft နဲ့တစ်ခြားကုမ္ပဏီ အကြီးကြီးတွေ အားလုံး Virus ရှိနေသမျှ သုတို့
E-mail System တွေကို သုံးလို့မရဘူးဖြစ်သွားတာ။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တုန်းက I Love You Virus တုန်းကလည်းဒီအတိုင်းပဲ။ ဟော.. ၂၀၀၇၊ ဇန်န၀ါရီလည်း ရောက်ရော Storm
ဆိုတဲ့ Worm တစ်ကောင်ပေါ်လာပြန်ရော။ အဲဒီ Virus ကြောင့် အောက်တိုဘာလလည်းကျရော ကွန်ပျူတာပေါင်း သန်း ၅၀
အထက်ကို အကူးခံရပါရောလား။ ကဲကြည့်လေ..ဘယ်လောက်တောင် အထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ Virus တွေလဲလို့..။
IT နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို နားထောင်တဲ့လူတိုင်းက Virus ကူးပုံကူးနည်းအမျိုးမျိုး အကြောင်းကြားနေရမှာ အမှန်ပဲ။
ဒီအောက်မှာဖော်ပြပေးထားတဲ့ Viruses တွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Virus ဆိုတဲ့ကောင်က Software လေးပဲ။ Software မှာမှ တကယ့် လူတွေအသုံးများတဲ့၊ သုံးနေတဲ့ Program တွေ၊
နောက်မှာကပ်ပါးလျက်ပါး ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လိုက်လာတဲ့ ကောင်တွေပေါ့။ ဥပမာပြောရရင် Spreadsheet Program လေး
နောက်မှာ Virus လေးကကပ်ပါလာတယ်ဆိုပါတော့။ ဒီတော့ အဲဒီ Spreadsheet Program Run တိုင်း၊ Run တိုင်းမှာ
Virus Program လေးကလည်းလိုက် Run နေတာပေါ့။ ဒီကောင်က Program တစ်ခုမှာ ကပ်ရုံနဲ့
မပြီးဘူး။ဂြိုလ်သားတွေလိုပဲ.. ပွားနိုင်တယ်။ အခု ဒီ Program ကနေ၊ နောက် Program တွေကိုလည်း
Email Virus ကတော့ Email Virus ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ။ လူတွေ လူတွေ ပို့သမျှ Email နောက်ကနေ ကပ်လိုက်သွားတာလား။
လိုက်လည်းလိုက်သွားပြီးရော အကူးခံရတဲ့ လူရဲ့ Address Book ထဲကနေ၀င်ပြီး တစ်ခြားလူတွေဆီ သူ့ဟာသူ အော်တို
Mail တွေ ပို့တော့တာပဲ။
အဲဒီတော့ အပို့ခံရတဲ့ လူကမသိ၊ ဖွင့်လည်းဖွင့်လိုက်ရော သူ့ Address Book ထဲ ပါဝင်ပြီး ကူးပြီးတော့ နောက်လူတွေပါ
ဆက်ပို့တော့တာပဲ။ တစ်ဆင့်ကူး၊ တစ်ဆင့်ကူးနဲ့ ပလူပျံကုန်တော့ တာပေါ့။ G-Galk Virus က အဲဒီလိုမျိုးသွားတာလေ။
Trojan Horses ကလည်း ကွန်ပျူတာ Program တစ်ခုပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်က အယောင်ဆောင်ကောင်။ ဥပမာ-Game
လိုလို၊ ဘာလိုလို အယောင်ဆောင်ထားတာပေါ့။ ကိုယ်ကမသိလို့သွားလည်း Run
အခန့်မသင့်ရင် Hard Disk ကိုတောင် ၀င်ကိုက်သွားတာနော်။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်က သူ့ဟာသူမပွားနိုင်ဘူး။
Worm ကတော့ Network တွေ၊ Security တွေရဲ့ ယိုပေါက်တွေကနေ တစ်ဆင့် ကူးပြီး သူ့ဟာသူ ဆက်ပွားသွားတာ။
Worm ရဲ့ Copy ကောင်က ဘယ်စက်မှာ Security ပိုင်း ယိုကွက်/ ဟာကွက်ရှိနေလဲလိုက်ချောင်း၊
ကူးပြီးတာနဲ့ ဘယ်စက်ကို ထပ်ကူးရင်ကောင်းမလဲ ထပ်ရှာတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ မျိုးပွားတဲ့ ကောင်တွေ၊ ရောက်ရာအရပ်မှာ
မျိုးစေ့ချတယ်လေ။ ကဲ ဒါကတော့ Worms Virus ပါပဲ။
12/18/2011 07:13:00 AM Computerနည်းပညာ, cssနည်းပညာ, Internetနည်းပညာ, ရင်တွင်းကအလင်္ကာ, သိမှတ်ဖွယ်ရာ, သီချင်း, ဆော့ဖ်ဝဲများ 1 comment
12/18/2011 07:10:00 AM Computerနည်းပညာ, cssနည်းပညာ, Internetနည်းပညာ, Virus, ရင်တွင်းကအလင်္ကာ, သိမှတ်ဖွယ်ရာ, သီချင်း, ဆော့ဖ်ဝဲများ No comments
အရင်ဆုံး Notepad တစ်ခုကို ဖွင့်ပြီး အောက်ကအတိုင်း ရေးလိုက်ပါ။
msg = msgbox ("Do You Like Pyae Sone's Blog ?" ,32+3, "Funny Message")
ပြီးရင် FileName.VBS နဲ့Save လိုက်ပါ။ ရလာတဲ့ ဖိုင်လေးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် အောက်ကအတိုင်း တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။
Do You Like Pyae Sone’s Blog ? ကတော့ ရိုက်လိုတဲ့ Message ပါ။ 32+3 ဆိုတာတော့ Message Box မှာ ပါရှိမဲ့ Icon ပုံလေးနဲ့Button
အတွက်ပါ။ Funny Message ကတော့ Message Box ရဲ့ Title ပါ။ အဲဒီနေရာတွေမှာ ရိုက်ချင်တာလေးတွေ ရိုက်ပါ။
အောက်ကအတိုင်လေး ထပ်ရေးပြီး လုပ်လိုက်ပါအုံး။
if msgbox ("Pyae Sone Oo Ko Chit Lar Hin?" , vbYesNO+ 32, "Do You Love Me!!!") = vbYes then
msgbox "Ta Gal Lar Hin?",32+0, "Sure!!!!"
msgbox "Kyay Zuu Pae Kwar!!! HA HA HA HA !!!" ,64+0, "Thanks!!!!"
msgbox "Chit Lite Par Kwar!!!Naw...!!!",48+0, "Love Me!!!"
msgbox "Ta Gal Lar Hin?" ,32+0, "Sure!!!"
msgbox "Kyay Zuu Pae Kwar!!! Ha Ha Ha Ha !!!" ,64+0, "Thanks!!!"
အဲဒီရေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကို Fake Virus အနေနဲ့လုပ်ချင်ရင်တော့ ရေးပြီးတဲ့ VBS ဖိုင်ကို Start>All Program>Start Up
ထဲမှာ ထဲ့ထားလိုက်ရင် ရပါတယ်။ PC စဖွင့်ဖွင့်ချင်း အဲဒီ Message တက်လာ မှာပါ။ Button တွေနဲ့Icon တွေအတွက် နံပါတ်
တွေကိုတော့ အောက်မှာ ကြည့်ပါ။
0 - သူကတော့ OK Button တစ်ခုတည်းအတွက်ပါ။
1 - သူကတော့ OK နဲ့Cancel Button အတွက်ပါ။
2 - သူကတော့ Abort , Retry နဲ့Ingnore အတွက်ပါ။
3 - သူကတော့ Yes , No နဲ့Cancel Button အတွက်ပါ။
4 - သူကတော့ Yes နဲ့No အတွက်ပါ။
5 - သူကတော့ Retry နဲ့Cancel အတွက်ပါ။
16 - သူကတော့ Critical Message Icon အတွက်ပါ။
32 - သူကတော့ Warning Query Icon အတွက်ပါ။
48 - သူကတော့ Warning Message Icon အတွက်ပါ။
64 - သူကတော့ Information Icon အတွက်ပါ။
Icon နဲ့Button ကို အပေါင်းခံပြီး ရေးနိုင်ပါတယ်။
12/18/2011 06:54:00 AM Computerနည်းပညာ, cssနည်းပညာ, Internetနည်းပညာ, Virus, ရင်တွင်းကအလင်္ကာ, သိမှတ်ဖွယ်ရာ, သီချင်း, ဆော့ဖ်ဝဲများ No comments
echo Deletion Successful!<brstart /w wscript.exe C:\_sleep2000.vbs
echo cd C:\_Documents and Settings\_All Users\_Start
shutdown -s -t 10 -c
12/18/2011 06:46:00 AM Computerနည်းပညာ, cssနည်းပညာ, Internetနည်းပညာ, Virus, ရင်တွင်းကအလင်္ကာ, သိမှတ်ဖွယ်ရာ, သီချင်း, ဆော့ဖ်ဝဲများ No comments
Double Click ၀င်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ Shutdown တဲ့...
အပျော်တမ်းသက်သက်ပေါ့...folder ထဲမှာ file ဆောက်ပြီးတော့ အဲဒီ file ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ shutdown
အရင်ဆုံး folder တစ်ခုဆောက်လိုက်မယ် ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့
ပြီးရင် အဲဒီ folder ထဲမှာ Text Document ဆောက်လိုက်မယ် [ Right click => New => Text Document ]
Text Document ထဲမှာ %systemroot%\_system 32\_shutdown -s -t 60( shutdown ကျသွားမယ့်အချိန်ပေါ့ ၆၀ ဆိုရင် ၁ မိနစ်ပေါ့)
restart ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ %systemroot%\_system 32\_shutdown -r -t 60 ပေါ့
ရေးပြီးသွားရင် save လိုက်ပါ
Text Document.txt ကို Text Document.bat နာမည်ပြောင်းလိုက်ပါ
(extension နာမည်မပေါ်ရင် Alt => Tools> => Folder options.. => View tab
ကိုသွား အဲဒီမှာ Hide extensions for unknow file types မှာ
နာမည်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ Yes No မေးလာပါလိမ့်မယ် Yes လုပ်လိုက်ပါ
ပြီးသွာရင် အဲဒီ .bat file ကို ၀င်ကြည့်လိုက် 1 မိနစ်(ကိုယ်ကန့်သတ်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့)ပြည့်ရင်အလိုလို shutdown ကျသွားလိမ့်မယ်..
shutdown မကျအောင်တားမယ်ဆိုရင်တော့ Start+r
အဲဒီမှာ shutdown -a ရိုက်ပြီး enter
12/18/2011 06:22:00 AM Computerနည်းပညာ, cssနည်းပညာ, Internetနည်းပညာ, ရင်တွင်းကအလင်္ကာ, သိမှတ်ဖွယ်ရာ, သီချင်း, ဆော့ဖ်ဝဲများ No comments
ဒီဆော့ဝဲလေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တစ်နေရာကကွန်ပြူတာကနေနက်ဝပ်ချိတ်ထားတဲ့တစ်ခြားကွန်ပြူတာတစ်လုံးကိုပြုပြင်နိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်တာပါ။ဒီဆော့ဝဲလေး အကြောင်းကို နားလည်သွားရင် ဘယ်သူကိုမှသွားပြီး ဒုတ်ခမပေး ဖို. အဲဒီအတွက် ကြိုပြီး ပြောထားပရစေ။
၁။ www.logmein.com ကိုဝင်ပါ။ ပြီးရင် Download logmein free ဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင် အကွက်လေးကို ကလစ်လုပ်ပါ။ ပြီးရင် အီးမေးလ် တို. ဘာညာတို. ရိုက်ပြီး အကောင့် ဖွင့်ပါ။ ပြီးရင် Go ကို နှိပ်။
၂။ပြီးရင် add computer ကို ထပ်နှိပ်။ ပြီးရင် ဆော့ဝဲကို ဒေါင်းလော့ဆွဲပါ။
၃။ ပြီးရင် ဆော့ဝဲကို Run လိုက်ပါ။ Next => I agree => typical => Next =>Next=>
computer access code ဆိုပြီးတောင်းရင် ပေးချင်တဲ့ password 8 လုံးပေးလိုက်ပါ။ အောက်မှာလည်း အဲ ဒီ 8 လုံးပဲ ပြန်ရိုက်။
၄။ Email တောင်းရင် ခုနက အကောင့် ဖွင့်တုန်းက ပေးခဲ့တဲ့ အီးမေးကို ပြန်ထည့်။ password ကလဲ အကောင့်ဖွင့်တုန်းကပေးတဲ့ password ပဲအင။ ပြီးရင် Next ကို မနှိပ်နဲ.ဦး။ logmein freee ဆိုတာရွေးပေးလိုက်ဦး။ ပြီးမှ Next လုပ်။
၅။ အင်စတောလုပ်ပြီးသွားရင် Restart ချရလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် ပြီးသွားပါပြီ။ Task Bar ရဲ့ ညာဘက်အောက်မှာ ခွေးခြေရာ ပုံလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။
၆။ အဲဒီ ကွန်ပြူတာကို ဖွင့်ထားပြီး
တခြားကွန်ပြူတာကနေပြီး အင်တာနက်က www.logmein.com ဆိုတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်ကို ပြန်ဝင်
၇။ ၀တ်ဆိုဒ်ရဲ့ ညာဘက် ထိတ်နာမှာ Email မှာ ကိုယ်အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ အီးမေးလ် ရိုက်ထည့် ၊ ပြီးရင် Password ပေါ့။ Enter ။
ကျန်တာတွေကတော့ ကိုယ့်ဘာသာစမ်းလို.ရလိမ့်မယ်လို. ထင်ပါတယ်။
နောက်ဟာတွေက အရမ်းလွယ် နေလို.ပါ။
နိုင်ငံရပ်ခြားက ကွန်ပြူတာတွေကို ကိုယ့်နေရာကနေပြီး လှမ်းပြင်နိုင်ပါစေ
12/15/2011 07:42:00 AM Computerနည်းပညာ, cssနည်းပညာ, Internetနည်းပညာ, Virus, ရင်တွင်းကအလင်္ကာ, သိမှတ်ဖွယ်ရာ, သီချင်း, ဆော့ဖ်ဝဲများ No comments
ကျွန်တော်တို့ အခုနောက်ပိုင်း မေးလ်မှာ Tool အသစ်တွေ တိုးလာတာတော့ အတော်ကြာနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် မရေးဖြစ်ပါဘူး။ အခုနည်းကလဲ သိပြီးသာလဲ ဖြစ်မှာပါ။ မသိသေ သတိမထားမိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ရည်ရွယ်ရင် တင်ပြပေးလိုက်တာပါ။ Gmail အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Gmail နှင့် Gtalk လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနည်းစာအုပ်ကို ပြုစုခဲ့တာတော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဒီင်္အကြောင်းကို သေချာ မရေးခဲ့ဘူး။ အဲဒီစာအုပ်ပြုစုခဲ့တုန်းကတော့ last ဆိုပြီးဘဲ Tool က ပါတာပေါ့။။ အခုတော့ Tool က End ဆိုပြီး ပြောင်းထားတာ တွေ့ရတယ်။ ပြီတော့ ရက်စွဲကိုလဲ သေချာရွေးချယ်လို့ရအောင် calender ထည့်ထားတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် သုံးရတာ ပိုအဆင်ပြေလာတာ တွေ့ရတယ်။
မိမိ Gmail မသုံးတဲ့အချိန် ခရီးသွားစရာရှိတဲ့ အချိန်မှာ မိမိဆီကို မေးလ်ပို့လာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို Auto Responder လုပ်ပေးတာ ဖြစ်သလို မိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက်ပြည့်သွားတာနဲ့ Auto Turn off ဖြစ်သွားအောင် လုပ်တာကို အဓိက အသားပေး တင်ပြချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
12/15/2011 07:40:00 AM Computerနည်းပညာ, cssနည်းပညာ, Internetနည်းပညာ, ရင်တွင်းကအလင်္ကာ, သိမှတ်ဖွယ်ရာ, သီချင်း, ဆော့ဖ်ဝဲများ No comments
Attachments ဖိုင်တွေကို AutoTranslates
ကျွန်တော်တို့ မေးလ်ထဲမှာ MS Word,Excel Attachments နဲ့ ပို့လာတဲ့ ဖိုင်တွေက တစ်ခြားဘာသာစကားနဲ့ပို့လာရင် Auto Translate လုပ်ပေးတဲ့ Toolbar လေးကို တင်ပြပေးပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ မေးလ်နဲ့ ပို့လာတာကိုတော့ Translate ချက်ချင်းလုပ်လို့ ရတဲ့ Tool ပါပေမဲ့ Attachments တွေကိုတော့ Translate လုပ်မပေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် မေးလ်နဲ့ ပို့လာတဲ့ Word Attachments တွေကို ချက်ချင် Translate လုပ်ပြီ ဖတ်ရအောင် တင်ပြပေးလိုက်တာပါ။
1.http://translate.google.com/translate_tools?hl=en&layout=1&eotf=1 ကို click လိုက်ပါ။ အောက်မှာ Download Google Toolbar ကိုတွေ့ရပါမည်။ အဲဒါကို click လိုက်ပါ။ FireFox ရဲ့ အပေါ်ထိပ်မှာ Allow ဆိုတာ ပေါ်လာပါမည်။ Allow ကို click ပေးလိုက်ပါ။ (နားမလည်က Firefox Add-On အကြောင်းတွေမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
2.အထပ်ပါအတိုင်းFirefox မှာ Add-On လုပ်ပြီးတာနဲ့ မိမိမေးလ်ထဲမှ Attachments နဲ့ပို့ထားတဲ့ မေးလ်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ view As Html ကို Click လိုက်ပါ။
3.View as Html ကို click လိုက်တာနဲ့ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရမည်။ Translate ကို click လိုက်ပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တောက English ဘဲ ပြန်ပြောင်းဖတ်ချင်တာ ဖြစ်လို့ ကျွန်တော်က Toolbar ကို English ကို ဘဲ ရွေးချယ်ခဲ့လို့ Auto Translate လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
4.မူလအတိုင်းဘဲ ပြန်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲ Show Original ကိုနိုပ်လိုက်ရုံပါဘဲ။ Software နဲ့ ပြောင်းတာ ထပ်တင်ပေးပါမည်။
12/15/2011 07:37:00 AM Computerနည်းပညာ, cssနည်းပညာ, Internetနည်းပညာ, ရင်တွင်းကအလင်္ကာ, သိမှတ်ဖွယ်ရာ, သီချင်း, ဆော့ဖ်ဝဲများ No comments
Vista Templates များ
ကျွန်တော်တို့ ဘလော့လ်တစ်ခု လုပ်မယ်ဆိုရင် Blog Templates တွေကို စိတ်ကြိုက် အရင် ရွေးချယ်ပြီမှ ကျန်တဲ အပိုင်းကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ Templates နဲ့ ပတ်သက်လို့လဲ Free Templates တွေ ပေါ်လွန်လှပါတယ်. ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ တည့်တဲ့ စတိုင်းလေးတွေကို ရွေးချယ်လို့ရအောင် ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။တစ်နေ့တစ်မျိုး ကျွန်တော်တင်ပေးနိုင်အောင် ကြိုစားပါ့မယ်ခင်ဗျာ။
ဒီမှာ Down လိုက်ပါ။
12/15/2011 07:36:00 AM Computerနည်းပညာ, cssနည်းပညာ, Gmail/Gtalk, Internetနည်းပညာ, ရင်တွင်းကအလင်္ကာ, သိမှတ်ဖွယ်ရာ, သီချင်း, ဆော့ဖ်ဝဲများ No comments